I-Benzylisopropylamine, iimeko zeNkangeleko: I-crystal ebonakalayo ebonakalayo enkulu. Iimeko zokugcina: Gcina kwindawo epholileyo, yokugcina umoya. Gcina kude nomlilo kunye nobushushu. Ukuba kufuneka igcinwe ngokwahlukeneyo kwiarhente ye-oxidizing, thintela ukugcinwa okuxubekileyo ngazo zonke iindlela. Xhobisa ngeentlobo ezihambelanayo kunye nobungakanani ...
Ukwahlulahlulahlula phakathi kwamayeza
Abaxhamli bezonyango banokwahlulahlulwa baba ziintsholongwane, i-antipyretic kunye ne-analgesic medical intermediates, inkqubo ye-cardiovascular intermediates zonyango, i-anti-cancer intermediates zonyango njalo njalo ngokwemihlaba yesicelo sabo. Kukho iintlobo ezininzi zamayeza athile ...
Ii-organic acid zibhekisa kwezinye izinto eziphilayo ezineasidi. Eyona acid ixhaphakileyo yi-carboxylic acid, eneasidi yayo evela kwiqela le-carboxyl. I-methyl calcium, i-acetic acid, njl njl. Indima yee-asidi ze-organic kwiimveliso zasemanzini 1 ...
Izinto ezibizwa ngokuba zii-intermediates zamachiza ziyinyani yemichiza ekrwada okanye iimveliso zemichiza ezisetyenziswa kwinkqubo yokuhlanganiswa kweziyobisi. Imichiza, engadingi mvume yokuvelisa iziyobisi, inokuveliswa kumatshini oqhelekileyo wemichiza kwaye, xa ifikelela kumanqanaba athile, ...
Uyisebenzisa kanjani i-potassium diformate ukuphucula ubushushu ekuphenduleni kokubeka iinkukhu phantsi kobushushu obuphezulu obuqhubekayo?
Iziphumo zobushushu obuphezulu obuqhubekayo ekubekeni iinkukhu: xa iqondo lobushushu elingaphaya kwe-26 ℃, umahluko wobushushu phakathi kokubeka iinkukhu kunye neqondo lobushushu elisezantsi liyancipha, kunye nobunzima bokuphuma kobushushu bomzimba obonyukayo, obukhokelela ekuphenduleni koxinzelelo. Ukuze ukukhawulezisa ubushushu d ...
Intengiso yeCalcium Propionate kwiHlabathi liphela kunye noHlolo loMmandla
Ingxelo ye-Global Calcium Propionate Market Outlook Report sisifundo esibanzi seshishini leCalcium Propionate kunye nethemba layo elizayo. Ehlabathini lonke, i-calcium propionate inyusa ileli kwinqanaba le-antimicrobial of preservatives. Izinto ezinje ngokhuseleko lokutya, ukwanda kwebango l ...
Intshayelelo malunga neTributyrin
Ukongezwa kokutya: Umxholo weTributyrin: 95%, 90% Tributyrin njengesongezo sokondla ukuzisa ukuphuculwa kwempilo yamathumbu kwiinkukhu. Ukupheliswa kweyeza lokubulala iintsholongwane njengabaxhasi bokukhula kwiindlela zokupheka zokutya kweenkukhu kunyuse umdla wezinye iindlela zokutya, kuzo zombini iinkukhu ezonyukayo ...
Elinye i-Antibiotic-Potassium Diformate
I-Potassium Diformate CAS NO: 20642-05-1 Umgaqo wePotassium uyilo lokukhulisa ukukhula kwezilwanyana. Ukuba iihagu zondla kuphela ukukhuthaza ukukhula, azinakho ukuhlangabezana neemfuno ezikhulayo zehagu zezakhamzimba, kodwa zikwabangela inkunkuma yezixhobo. Yinkqubo esuka ngaphakathi nangaphandle ukuphucula i-envi yamathumbu ...
ICalcium Propionate, iCalcium Acetate
I-Shanghai Dumi Biotechnology Co., Ltd, uphando kunye nokuphuhlisa iimveliso ezintsha: iCalcium Propionate, iCalcium Acetate. ICalcium propionate yindawo ekhuselekileyo nethembekileyo ye-antifungal arhente yokutya kunye nokondla evunyiweyo nguMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) kunye noMbutho woKutya noLimo weSizwe esiManyeneyo ...
Ukusetyenziswa kwe-potassium diformate kwisongezelelo sokutya
Kwimveliso yokufuya, nokuba uzalisa kakhulu okanye uzalisa usapho, ukusetyenziswa kwezongezo zokutya zizakhono ezibaluleke kakhulu, ezingasiyimfihlo. Ukuba ufuna ukuthengisa ngakumbi kunye nengeniso engcono, izongezo zokutya ezikumgangatho ophezulu yenye yezinto eziyimfuneko. Ngapha koko, ukusetyenziswa kwesondlo ...
Iindlela ezininzi eziqhelekileyo zamayeza
Izindlela ezininzi ezibalulekileyo zamayeza: 1, 1- (6-methoxy-2-naphthyl) ethanol Zininzi iindlela zokwenza i-naproxen, phakathi kwayo indlela ye-carbonyl yokugqwesa ingaphezulu kwendlela yesiqhelo ngenxa yokukhetha kwayo okuphezulu kunye nobuhlobo bokusingqongileyo. Isitshixo esiphakathi ...
Kuqhutywa luphuhliso olukhawulezileyo lwentengiso yamayeza ehlabathi, kwimeko yokhuphiswano olunamandla lwamaxabiso eziyobisi, ngenxa yolawulo lweendleko, i-API kunye nomzi mveliso ophakathi wamayeza unesidingo sokudlulisela kumazwe asaphuhlayo kunye neendleko zexabiso. Nangona kunjalo, i-China, i-India i ...